Maxaad Taili Kids - Ningbo Taili Import Bonus iyo dhoofinta Co., Ltd
MAXAA TAILI KIDS
8 sababo fudud sababta waa in aad doorato Taili Kids.
KOOXDA qaaska ah OF samaynta
Shirkadda Our waxaa la aasaasay 1994, tan iyo markaasi waxaan ku si degdeg ah horumariyo koox ka kooban in ka badan 20 samaynta tayo leh kuwaas oo ku takhasusay in la abuuro, waxyaabaha cusub user-saaxiibtinimo in macaamiisha jecel.
BADBAADADA YIMID HORE
Soo bandhigtay isbaarooyinka habka wax soo saarka, iyo qaababka amniga sida looxyada joogto ah iyo suunka badbaadada 5 dhibcood on strollers ilmaha our, alaabta oo dhan Taili ka gudubto imtixaanka oo adag, sida baaritaanada badbaadada alaabta EN iyo SGS, kulanka heerarka ugu sareeya ee warshadaha.
waxyaabaha lagu sameeyey oo dhar raaxo leh in ay yihiin gacanta lagu soo xulay ka saarayaasha dharka ugu fiican. Waxay jilicsan in la taabto, weli raagaya ku filan si ay u tagaan meel fog yihiin.
Waxaan leenahay khubaro tayo-hubsashada kuwa loo hubiyo heerka our korsocodka waxaa la kulmay oo ka sarre maray inta lagu guda jiro geeddi-socodka kasta oo ka mid ah wax soo saarka.
Waxqabadka sare AT sicir ay xamili karaan
Ku raaxayso tayada aad ka soo saaraha lagu kalsoonaan karo oo lagu aamini karo filan, at qiimaha aan la garaaci karaan.
ADEEGGA MACAAMIISHA GREAT
Waxaan ka dhigi waxay inoo ganacsiga si ay u tagaan mile oo dheeraad ah oo loogu talagalay macaamiisha our. Just eegno waxa ay dadka kale leeyihiin in la yidhaahdo on our page Facebook, dib u eegista blog iyo Google+.
Fududahay in la shaqeeyaan STROLLERS
All of strollers our daraan hab fudud-laab ka dhigaya furitaanka oo iyaga ku dhow cinch ah (feature a waalidiinta mashquul jecel).
Click here to Our waxaa la sameeyey ee aluminium khafiifa in yareeyo bulk iyo miisaanka of strollers our, iyaga fududahay in la isku laab, oo lagu daray ay si fudud u kaydi gurayso, jirridda of gaariga, iyo habboon in la isticmaalo inta aad qaadanaysid gaadiidka dadweynaha.